Nguva yekuverenga: 3 maminitsi France munhu akakurumbira vashanyire hotspot nekuvongwa maguta ayo akanaka uye mukurumbira varipo. Nyika hope nzvimbo inozivikanwa pasi rose nokuda kwayo incredible tsika uye zvinonaka chikafu. Nepo vashanyi vakawanda anodirana kuna Paris, kazhinji guta anogona kuva rakawandisa chaizvo, kunyanya…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi The zhizha achigogodza mikova uye vanhu vari kuronga kupedza akadzikama muzhizha pazororo munzvimbo dzakasiyana. Kuchengeterwa kwetikiti rako rechitima kungave kwakaoma sezvo pachave nemutsetse murefu uye kana iwe uchitsvaga imwe inonakidza imwe nzira…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Street muri munhu ano chimiro romubati mashoko chinoita maguta edu zvikuru yakanaka. A mugwagwa seinäkartta akanaka anogonawo kukukurudzira kufunga nezvenyaya inokosha munzanga kana nezvechiitiko mabasa dzenhoroondo vanatenzi. Maguta eEurope akazara…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Art Underground mu pevhu dzemapurisa sokuti kuva miziyamu mutsva vanhu. Vari achiva itsva inofanira-ona dzokugara kuti umhare iyi. Ndiani angadai akafunga? Vamwe zvikuru zvinotyisa pachena dzezvimwe, kusanganisa hukuru hukuru uye dhizaini kunogona kuwanikwa…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Hostels vakambotya Rap akaipa nokuva tsvina, kudzima, uye kunhuhwa, anyenga. Asi wanga uchiziva here kuti mahostel akagadziridzwa zvino? Nokuti vaya vasingazivi chii hostels vari, hatina kungopotsa hotera nekumhanya nayo. Hostels vari chipa pokugara…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Kana usina chokwadi icho chivaraidzo mumapaki mu Europe ndiyo yakanakisisa, zvino tarisa mberi. Nyaya Iri mazita mamwe water mumapaki unogona kushanyira mu Europe izvozvi! Isu tichakupa yakadzama tsananguro yeumwe neumwe uye sei…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Kana uchitsvaka yakanakisisa mazambiringa zvitoro mu Europe, hausi chete wakarindira avo isingachinji zvidimbu. Uri zvakare kutora rwendo pasi ndangariro mukoto uye kuongorora nhoroondo. A mazambiringa chitoro kwakafanana fashoni miziyamu, zvinoratidza tsika yeguta…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Ini ndiri farira mufambi uye kuti zvakare kungoramba uri iwe mufambi. Chinhu chakanakisa nezveichi chinhu chekuti iwe unosvika pakuona nyika uye haufanire kumirira chero munhu kuti asununguke wobva waronga rwendo uye kutora zvavanowana…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Iwe wakaita achifamba nechitima? Iwe wakaita kuona zvinoshamisa nhare munyika akafanana France? Kana kuri kuti ndizvo, ipapo iwe kwasvika zvakanaka nzvimbo. Nokuti ino “10 Charming nhare In France By Train” inokupa yakatarwa rondedzero ye…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Ungave uri doro anoda vachitsvaka kutora yenyu chido mumugwagwa kana iwe watova rwendo Europe iri mabhuku, tarisa kune iyo Beer Nzira nechitima – Best Beers mu Europe By Train. Iwe haangaodzwi mwoyo! Even nani,…